Ungahlanza kanjani tile phansi futhi kukhanya: amathiphu wokuhlanza nsuku zonke - Isazi seZD Floor
Ikhaya > Ungahlanza kanjani tile phansi futhi kukhanya: amathiphu wokuhlanza nsuku zonke
Hlela: UDenny　2019-12-13　Iselula
1. Ungasusa kanjani umuthi wokuhlanza amagciwane ukuze phansi kuhlanzeke kakhudlwana? Okokuqala, lungisa amathuluzi okubulala amagciwane angalungile. Ngokubalulekile, kukhona iziponji, amathini wokuphuza, izihlanza nemishini yokuhlanza ehambelana namabala asetafuleni eliphansi.
2. Ngaphambi kokuphonsa emhlabathini, qala ugcwalise umsele wokuthambisa ngamanzi bese ufafaza ungqimba olukhulu ngokulinganayo kumatayela wangaphansi. Ufafaza okuningi. Ngemuva kokufafaza ngamanzi, galela isiponji ukuze ugeze zonke izidalwa, ukhwebule amanzi asesiphungweni, bese uphonsa isitezi phansi esigcawini efafazwe ngamanzi. Ngoba umhlabathi ufafazwa ngamanzi, akukho mzamo omkhulu ukudonsela phansi, ngokushesha ngemuva kokuhudulwa, ngoba amanzi asefakwe phansi isikhashana, izinto ezihlanzekile emhlabathini ziba nzima kakhulu ukuzisusa.
3. Ngamabala athile, fafaza isicoci esikhethekile bese umyeka imizuzu emihlanu. Bese usebenzisa i-gauze ethambile (ithawula) noma ibhulashi ukukala amabala. Ngokuqondene nokuthi yikuphi okubulala amagciwane okufanele kukhethwe, kuya ngohlobo lwesigaxa sendawo yezitini. Ungakhetha ngokuya ngesimo esingenhla.
4. Isigaxa siyaklwebeka futhi sihlanzwe. Ngemuva kokudonsa yonke le nto, i-mop izoba ihlanzekile. Ngalesi sikhathi, izinto ezihlanzekile ezisekhanda le-mop kufanele zigezwe futhi zikhishwe. Nali ithiphu elihle kuwo wonke umuntu. Uma unebhodi yokugezela ekhaya lakho, ungalifaka kubhavini omkhulu futhi ufake amanzi, ukuze ukwazi ukuthoba ikhanda le-mop. Swayipha emuva naphambili ebhodini, ikhanda lesipanji lizohlanzwa maduze, futhi kulula futhi kulula.
5. Ngemuva kokuthi i-mop ihlanjululwe, isiponji sizodonswa ukoma amanzi, bese sihamba masinyane emhlabathini ngemuva kokugcotshwa, sizodonsa amanzi angenasidingo emhlabathini, futhi angahlanzekile Indawo, ephinde yabulala amagciwane kanye, umphumela uzoba mubi kakhulu!
Ungahlanza kanjani tile phansi futhi kukhanya: amathiphu wokuhlanza nsuku zonke Okuqukethwe okuhlobene
Izindlela ezijwayelekile zokubumba phansi zamathayela phansi: 1. Ukuhlanza nsuku zonke amathayela e-ceramic, ungasebenzisa i-detergent, insipho, njll. 2. Sebenzisa insipho ukufaka ingxube encane ye-...